UGuardiola uveza inselelo anayo uma ebhekana ne-United | Scrolla Izindaba
UGuardiola uveza inselelo anayo uma ebhekana ne-United
Umphathi we-Manchester City uPep Guardiola uyakwamukela ukuthi i-Manchester United yiqembu okunzima ukulishaya ngaphansi kuka-Ole Gunnar Solskjaer. Kepha uzokwamukela inselelo.
I-City ibhekane nomakhelwane wayo onomsindo esicongweni setafula esizoqokwa njengomnqobi wesicoco nge-Super Sunday ngeSonto e-Etihad stadium. Umdlalo uzoqala ngo-18: 30.
Emdlalweni wangoZibandlela ngonyaka odlule, i-City ne-United zadlala ngokulingana ngamagoli e-Old Trafford. Kodwa emdlalweni wangaphambilini, i-City yanqoba i-United ngamagoli amathathu kwelilodwa emdlalweni owandulela owamanqamu we-EFL Cup.
Ukunqoba kwe-Manchester City esefomini kuzovula amaphuzu ayi-17 angenakuphikiswa etafuleni leligi futhi kwandise nemidlalo yayo engama-29 engahlulwa emidlalweni engama-29 kuyo yonke imiqhudelwano, ngaphambi kwemidlalo eyishumi yokugcina yesizini.
I-Citizens isiqophe ukunqoba okungama-21 ukulandelana. Baphinde bahlala ekuzingeleni yonke imincintiswano yezicoco ezintathu, kuyilapho ama-Red Devils kusamele akhishwe ekhaya emidlalweni engama-21.
UPep Guardiola uthe i-Manchester United imhlabe umxhwele emdlalweni wayo ne-Chelsea ngoLwesine olwedlule ebusuku futhi ukholelwa ukuthi bangabahambi abakahle.
“Ngihlale ngilungiselela ukushaya izimbangi. Siyalazi izinga abanalo. Ngihlabeke umxhwele kakhulu ngendlela abadlale ngayo e-Stamford Bridge. Siyayamukela inselelo futhi sifuna ukwenza umdlalo omuhle ukuzama ukuyinqoba,” kusho uGuardiola ezinkundleni yezokuxhumana ekhasini le-Manchester City.
Wengeze wathi: “Ngiyazi ukuthi i-United inzima kangakanani. Nginomuzwa wokuthi bayiqembu elingcono njalo ngesizini. Abalahlekelwanga isikhathini esingaphezu konyaka. Bahlala bathola imiphumela emihle lapha e-Etihad Stadium. Kodwa siyalazi ithuba [futhi] kufanele sandise inzuzo yethu.”
Owase-Spain uqokwe njengomphathi wenyanga kaNhlolanja we-Premier League. Umphathi we-City uqede enye inyanga ephelele, wanqoba yonke imidlalo eyisithupha ye-Premier League, washaya amagoli ayi-15 wangenelwa amathathu kuphela.